10 Nights အစီအစဉ်
| tour Code ကို: 150
နေ့ 01: CHANDIGARH - SHIMLA
Chandigarh လေဆိပ် / မီးရထားဘူတာရုံမှာဆိုက်ရောက်ပေါ်၌ကောက် & Shimla မှမောင်းတယ်။ Shimla, အ snowcapped Shivalik တောင်တန်းနေရခြင်း set ဗြိတိန်အိန္ဒိယယခင်နွေရာသီမြို့တော်, အားကြီးသောဟိမဝန္တာ၏အရှိဆုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များအချို့ပေးထားပါတယ်။ Shimla မှာဆိုက်ရောက်တွင်စစ်ဆေး-In ဟိုတယ်တွင်။ (ညတွင်းချင်း Shimla အတွက်)
နေ့ 02: SHIMLA
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်ဤသည်နေ့ရက်သည် Shimla နှင့်န်းကျင်ရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအဘို့အဆက်လက်ဆောင်ရွက်နှင့် Kufri သွားရောက်ကြည့်ရှု။ 2,622 မီတာအမြင့်မှာ Kufri က၎င်း၏တောင်တက်နှင့်တောင်တက်လမ်းကြောင်းများအတွက်ကျော်ကြားသောဖြစ်ပြီး, နှင်းလျှောစီးနှင့် tobogganing များအတွက်ဆီးနှင်းဖုံးတောင်စောင်း။ နေ့လည်ခင်း Shimla တစ်ဦးလမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်ကို ယူ. , မြို့ရဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ရှုထောပူဇော်သော Jakoo တောင်ကုန်းသွားရောက်ကြည့်ရှု, ဒု Regal Lodge သို့မဟုတ်လမ်းဆင်းသွားလာရကြ၏။ (ညတွင်းချင်း Shimla အတွက်)
နေ့ 03: SHIMLA - MANALI
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်ဤသည်နေ့ရက်သည်အထဲက Check နှင့် Manali မှမောင်းတယ်။ Enroute ဟိုတယ်မှာ Check ဆိုက်ရောက်တွင် Dashehra ကညာစသည်တို့ကို, kullu ချိုင့်ဝှမ်း, ထိုကဲ့သို့သောဘေရက်စ်မြစ်အဖြစ်သာယာလှပအစက်အပြောက်များဓါတ်ပုံတွေကိုယူ, ပေါ်မှာသင့်ကင်မရာများစောင့်ရှောက်လော့။ Manali snowcapped ထိပ်နေရခြင်း set 1,929 မီတာအမြင့်မှာရုပ်ပုံ-စုံလင်သောတောင်ကုန်းအပန်းဖြေဖြစ်ပါသည်, Manali ၏ဂုဏ်အသရေမြို့မှတဆင့် meandering ၎င်း၏ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေနှင့်အတူဘေရက်စ်မြစ်နား enchanced ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းန်းကျင်အားလုံး deodar နှင့်ထင်းရှူးပင်သေးငယ်တဲ့လယ်ကွင်းများနှင့်သစ်သီးဥယျာဉ်ခြံတို့ကိုမြင်။ တစ်ဦးချင်းစီလှုပ်ရှားမှုများအခမဲ့ညဦးယံအချိန်။ (ညတွင်းချင်း Manali အတွက်) ။
နေ့ 04: MANALI
နံနက်စာ Manali ၏ဒေသခံရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအဘို့အဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ဤသည်နေ့ရက်သည်, ထို 450 နှစ်ပေါင်းအချို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ woodcarving တင်ဆက်ပေးတယ်ရာ Hadimba ဒေဝီမှဆက်ကပ်အပ်နှံဟောင်းဗိမာနျသို့သွားရောက်။ ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ပူပြင်းတဲ့ဆာလဖာစမ်းလူသိများ Manu ဘုရားကျောင်းနှင့် Vashisht Kund, သွားရောက်လည်ပတ်။ ဒေသခံတိဘက် Market ကမှာစျေးဝယ်များအတွက်အခမဲ့ညဦးယံအချိန်။ (ညတွင်းချင်း Manali အတွက်) ။
နေ့ 05: MANALI (Optional)
ဤသည်နေ့ရက်သည်အစောပိုင်းနံနက်စာ Rohatang လမ်းမပေါ်တွင်နှင်းပွိုင့်ဘို့အဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်။ Solang vallwy မှာ Enoute ရပ်နား။ Rohtang pass (မြင့် 3940 မီတာ) Manali ထံမှ 51 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာဆီးနှင်းဖုံးလွှမ်းလမ်းများမှ, ဒီ pass ယခုနှစ်နီးပါး 8 လကြာ acceddible မဟုတ်ပါဘူး။ ညဦးယံအချိန်ပြန် Manali နှင့်တစ်ဦးချင်းအားလပ်လှုပ်ရှားမှုများအခမဲ့အချိန်ဖြစ်သည်။ Rohtang Pass ကိုမှလမ်းများပိတ်ထားနေတယ်ဆိုရင်ထို့နောက်နှင်းပွိုင့် (Pony / မြင်းများတိုက်ရိုက်ငှားရမ်းထားနိုင်ပါသည်) သွားရောက်ကြည့်ရှု။ နေ့ချင်းညချင်း Manali ၌တည်၏။
နေ့ 06: DHARAMSHALA TO သို့ MANALI
Baijnath မှာရပ်တန့်လမ်းကိုအပေါ် 260 ကီလိုမီတာ၏တစ်ဦးကအကွာအဝေးလက်ဖက်ရည်ဥယျာဉ်သည်ကျော်ကြားသော Palampur မှာထပ်မံက၎င်း၏ Shiva ဘုရားကျောင်းနှင့်လူသိများ။ Dharamhsala 18 ကီလိုမီတာ ပတ်သက်. Dhauladhar တောင်တန်း၏စွယ် Kangra ၏မြောက်ဘက်-အရှေ့ပေါ်လဲလျောင်းနေတဲ့တောင်ကုန်း-ဘူတာရုံဖြစ်ပါသည်, ဒါဟာမြင့်မားသောထင်းရှူးနှင့်ပိတ်ပင်သစ်ပင်များနေရခြင်းသည်၎င်း၏သာယာလှပအလှတရား set ကိုလူသိများသည်။ ဒါကြောင့်မိမိသန့်ရှင်းအဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလားမား၏ယာယီဌာနချုပ်ဖွစျလာတဲ့အခါ 1960 ကတည်းက, Dharamshala "အိန္ဒိယအတွက် Little ကလာဆာ" အဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖြစ်မှမှထမြောက်တော်မူပြီ။ အို / N ကိုဟိုတယ်
နေ့ 07: DHARAMSHALA - DALHOUSIE
, Mc Leodgunj, စစ်ပွဲအောက်မေ့ဖွယ်, Bhagsunath ဗိမာန်တော်နှင့် Dal ရေကန်မှာသူ့အဘို့သန့်ရှင်းဒလိုင်းလားမားနေအိမ်သို့ပါဝင်သောနေရာများ၏ဒေသခံရှုခင်းများကြည့်လုပ်နေပြီးနောက် Dalhousie ဆီသို့ဦးတည် Dharamshala ထံမှနံနက်စာ drive ကိုပွီးနောကျ။ ညဦးယံ၌ Dalhousie ရောက်ရှိဖို့။ အို / N ကိုဟိုတယ်
နေ့ 08: DALHOUSIE
Dalhousie ဗြိတိသျှဘုရင်ခံပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့ပြီး - ထို l9th ရာစုအထွေထွေ, သခင် Dalhousie ။ ထင်းရူး, dodders, သပိတ်နှင့်ပန်းပွင့် rhododendron - မတူညီအသီးအရွက်များကဝိုင်း။ Dalhousie ၏ပြည်တွင်းအပန်းဖြေ Panjipula, Subhash Baoli နှင့်အထူ Deodar သစ်တောကဝိုင်း Dalhousie ထံမှ Khajjiar 24 ကီလိုမီတာမှလေ့လာရေးခရီးမှအလည်အပတ်ခရီးပါဝင်သည်။ Khajjiar မှ Dalhousie မှမောင်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အို / N ကိုဟိုတယ်
နေ့ 09: DALHOUSIE - AMRITSAR
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Amritsar ဖို့ဟိုတယ်နှင့်လွှဲပြောင်းထံမှထွက်စစ်ဆေးပါ။ နောက်ပိုင်းတွင်ရွှေဘုရားကျောင်း, Jalyanwala Bagh & Waga နယ်စပ်ရေးရာသွားရောက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ နေ့ချင်းညချင်း Amritsar ၌တည်၏။
နေ့ 10: AMRITSAR - CHANDIGARH
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်ဤသည်နေ့ရက်သည်အထဲက Check နှင့် Chnadigarh မှမောင်းတယ်။ အတွင်းစစ်ဆေးမှုများအဘို့အရန် Chandigarh လွှဲပြောင်းမှာဆိုက်ရောက်တွင်။ Chandigarh အတွက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
နေ့ 11: CHANDIGARH - ထွက်ခွာ
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်ဤသည်နေ့ရက်သည်, ထိုဟိုတယ်ကနေထွက် chcek နှင့် Chandigarh ၏အပန်းဖြေခရီးစဉ်များအတွက်ရှေ့ဆက်။ ရော့ခ်ဂီတဥယျာဉ်သို့သွားရောက်။ တစ်ဦး unpretentious ဝင်ပေါက်ကျောက်ဆောင်, ကျောက်ကျိုးပဲ့ကြွေထည်တစ်ခုခမ်းနားနီးပါး Surrealist အစီအစဉ်မှဦးဆောင်, စစ်သား, ချောင်းပြွန်စွန့်ပစ်ကျိုးနှင့်ဖန်လက်ကောက်ပစ်ပယ်, ဘုံဗိမာန်တစ်ခုအိပ်မက်ရိုးရာကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးရန် juxtaposed စွန့်ပစ်, ကျောက်မီးသွေးနဲ့ရွှံ့-အားလုံးတည်ဆောက်ခြင်း မျောက်, ရွာအသက်, အမျိုးသမီးများနှင့်ဘုရားကျောင်း။ အဆိုပါခရီးစဉ်အဆုံးသတ်ဘယ်မှာ Chandigarh လေဆိပ် / မီးရထားဘူတာရုံမှနောက်ပိုင်းတွင်အပြောင်းအရွှေ့။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး / ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
အဘယ်သူမျှမ popups ဆွဲတင်ပြီး?